Codashop💝KBZPay တို့ရဲ့ Valentine’s Day ပရိုမိုးရှင်း | Codashop Blog MM
Home Promo Codashop💝KBZP...
Codashop💝KBZPay တို့ရဲ့ Valentine’s Day ပရိုမိုးရှင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ (၈)ရက်နေ့မှ စတင်ကာ Codashop Myanmar တွင် KBZPay ဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာဂိမ်းအတွက် ၅,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဝယ်ယူပြီး သုံးပါတ်တိတိ အပတ်စဥ်ဆုလက်ဆောင်များကံစမ်းနိုင်မည့် အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအစီအစဥ်သည် Codashop Myanmar တွင် KBZPay ဖြင့် ပေးချေမှုအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ပထမအပတ်စဥ် => ဖေဖော်ဝါရီလ (၈)ရက်နေ့မှ (၁၄)ရက်နေ့အထိ
ဒုတိယအပတ်စဥ် => ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅)ရက်နေ့မှ (၂၁)ရက်နေ့အထိ
တတိယအပတ်စဥ် => ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၈)ရက်နေ့အထိ
ပထမအပတ်ရဲ့ဆု - Gaming Mouse
ဒုတိယအပတ်ရဲ့ဆု - Headphone
တတိယအပတ်ရဲ့ဆု - Phone
၁။ အထက်ပါပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း Codashop Myanmar တွင် KBZPay ဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာဂိမ်းအတွက် (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးနှင့်အထက်ဝယ်ယူပါ။
မှတ်ချက်။ Codashop Myanmar တွင် KBZPay ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သော ဂိမ်းများအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည်။
၃။ အီးမေးလ်လိပ်စာဖြည့်သွင်းပြီး (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးနှင့်အထက် အောင်မြင်စွာဝယ်ယူထားသော Transaction တစ်ခုစီအတွက် ကံစမ်းခွင့်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ သင်သည် ပထမအပတ်စဥ်ကာလအတွင်း Life After အတွက် (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး၊ Zepeto အတွက် (၈,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးစီ ဝယ်ယူလျှင် Logitech Gaming Mouse အတွက် ကံစမ်းခွင့် (၂)ကြိမ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၁။ ကံစမ်းထားသူများထဲမှ ကံထူးရှင်များကို Codashop Myanmar မှ မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
၂။ ပရိုမိုးရှင်းကာလ(၃)ပတ်အတွင်း ကံထူးသွားတဲ့သူ (၃)ယောက်စလုံးကို Codashop Myanmar ၏ တရားဝင် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှတဆင့် မတ်လ (၁၁)ရက်နေ့တွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်းကြေညာပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက Codashop Myanmar မှအဆုံးအဖြတ်သာလျှင် အတည်ဖြစ်ပါသည်။
များများဝယ်လေ ဆုကြီးတွေ များများကံစမ်းနိုင်လေဆိုတော့ အခုပဲ ကြိုက်တဲ့ဂိမ်းအတွက် Codashop မှာ KBZPay နဲ့ဝယ်ပြီး အပါတ်စဥ် ဆုလက်ဆောင်တွေ ကံစမ်းလိုက်တော့နော်!
LifeAfter အတွက် KBZPay နှင့်ဝယ်ယူရန်
ZEPETO အတွက် KBZPay နှင့်ဝယ်ယူရန်
Free Fire အတွက် KBZPay နှင့်ဝယ်ယူရန်
Previous articleCodashop မှာ MPT ဖုန်းဘေလ်နဲ့ ကြိုက်တဲ့ ဂိမ်း Item တွေဝယ်ပြီး 100% Data Cashback ရယူလိုက်ပါ! 🥳
Next articleMPT နှင့် Codashop Myanmar တို့မှ ပြုလုပ်သည့် “Valentine’s Promotion” အစီအစဉ်